सूचना/प्रविधि – Janaubhar
Nov222018 by janaubharNo Comments
चन्द्रमा पछि कृत्रिम सूर्य बनाउने तयारीमा चीन
प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर ६, २०७५ |
आफ्नो आकाशमा ८० किमि क्षेत्र उज्यालो दिने कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै गरेको चीनले कृत्रिम सूर्य पनि बनाउने तयारी गरेको छ । चीनका बैज्ञानिकहरुले स्वच्छ ऊर्जा पैदा गर्ने उद्धेश्यका साथ कृत्रिम सूर्य बनाउने तयारी थालेकाछन् । यो खास सूर्य भन्दा ६ गुणा धेरै तातो हुनेछ । जहाँ खास सूर्यको गर्भ करिब १.५० करोड डिग्री सेल्सियससम्म तातो हुन्छ भने चीनको यो नयाँ सूर्य १० करोड डिग्री सेल्सियस सम्म तातो पैदा गर्न स
मोबाइल र सामाजिक सन्जाल प्रयोगमा भारत भन्दा नेपाल अघि
मोबाइल र सामाजिक सन्जालको प्रयोगमा नेपालीले भारतीयलाई जितेका छन । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पछिल्लो सर्वेक्षणले भारतीय भन्दा नेपाली जनता प्रबिधिको प्रयोगमा अगाडि देखिएका छन । काठमाण्डौमा सार्वजनिक गरिएका १८ देशका करिब ४० हजार सर्वसाधारणमा गरिएको सर्वेक्षणले नेपालको कुल जनसंख्याको दुई तिहाई जनता मोइबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको छ । आईडीआरसी,सीआरडीआई संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ७२ प
अब कारमा चढेर उड्न पाइने
विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तिव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । बैज्ञानिकहरुले विलाशीयुक्त उपकरणहरुको आविस्कार गर्ने क्रममा विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारेको छन । करिब १२ वर्षको प्रयास पछि विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारिएको छ । अब यसको विक्री शुरु गर्ने तर्खर गरिँदैछ । कार निर्माता कम्पनिले अमेरिकाबाट अर्को महिनादेखि यसको अग्रिम–बुकिङ गर्दैछ । ग्राहकले भने अर्को वर्षदेखि मात्रै यो कार घर लान पाउ
मोबाइल हरायो ? चिन्ता नगर्नुस,यसरी भेटिन्छ
तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या विग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइ दिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ । अझै अर्को खुशीको कुरा त के छ भने हराएको या फुटेको मोबाइलबाट डाटा या फाइल हराउने छैनन सबै भेटिने छन किनभने मोबाइल हराउनु अगावै तपाईंको मोबाइलका सबै डाटाहरु त्यो कम्पनीमा सुरक्षित रहेका हुन्छन । तर तपाईंले आफ्नो मोबाइल किनेको मूल्यको पाँच प्रति
Sep62018 by janaubharNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ २१, २०७५ |
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै विश्वका हरेक क्षेत्रमा नयाँ,नयाँ प्रयोगहरू भइरहेकाछन् । यसले गर्दा मानवीय जनशक्ति विस्थापित हुँदै गइरहेको छ । यसै क्रममा शल्यक्रियाका लागि रोवटको प्रयोग गरिने भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित सफदरगंज अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि रोवटको प्रयोग गरिने भएको हो । उक्त प्रयोगको लागि अस्पतालले १८ करोड भारुमा रोवट डाक्टर किन्न लागेको हो । उक्त रोवटको प्रयोग विपन्न वर्गका मानिसका
May112018 by janaubharNo Comments
फेसबुक चलाउनुहुन्छ ? जान्नुहोस् यसका रोचक तथ्य
¨ बिश्वमा डेढ अर्ब मानिस फेसबुक चलाउँछन् । तर यो दुँनियाकै ठूलो सोसल नेटवर्किंग साइटका केही गुह्य तथ्यहरुको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आउनुहोस् यी एक दर्जन तथ्य बारे जानौँ, जो रोचक छन् तर तपाइँलाई पनि अहिलेसम्म थाहा नभएको हुनसक्छः ¨ फेसबुकमा पहिलोपटक जुन अनुहार देखियो त्यो अमेरिकी अभिनेता अल पचिनोको थियो । ¨ फेसबुकमा एउटा यस्तो फिचर पनि छ जसमा तपाइँले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो अकाउन्ट व्यवस्थाप